Manohy ady no ady eo… | NewsMada
Mandeha ny fotoana. Amin’izany, mitombo hatrany ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus. Mbola izay aloha ny resaka lehibe sy maika. Ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana izao. Mafy sy sarotra ny ady. Tena lazon’ady. Tsy vitan’izay, tsy misy faritra tsy ahitana izay fitondrana tsimokaretina izay, afa-tsy ny faritra Melaky. Nahoana loatra?
Ny atao ihany no antony. Na efa samy niezaka niaro ny sisintany azy aza, ohatra, ny isam-paritra, miparitaka ny tsimokaretina. Nisy na misy hatrany ny fandehanana antsokosoko etsy sy eroa. Ao ny efa tratra, mety mbola misy hatrany any ho any… Tsy fahalalana, tsy firaharahana na fanahy iniana? Samy tomponandrai kitra tsy misy afa-bela na ny mpitondra na ny olona entina.
Tsy hamehana ara-pahasalamana no atrehin’ny sasany amin’izany fa fahamehana amin’izay mahadodona azy manokana. Maningana ao anatin’ny besinimaro? Mampiditra antambo ho an’ny tena, mitondra loza ho an’ny hafa. Izay ihany. Tsy fitandremana, tsy fanarahana fepetra. Eny, na eo aza ny hoe mifindra sy miparitaka amin’ny alalan’ny rivotra ny tsimokaretina Coronavirus.
Na hanao ahoana ny ho tohin’ny ady sy izay ho farany, raha eo hatrany ny tsy fahatongavan-tsaina sy ny tsy fahamatorana? Efa ho lava ny fampahatsiahivana, fampitandremana… Tonga amin’ny hoe henjana sy hentitra aza ny fanaraha-maso, arahina fanasaziana sy famaizana. Nefa mbola misy ihany afa-miporitsaka. Fitadiavana mahazaka maniraka? Na tsy mahalala afa-tsy ny tena…
Izao ny vokany? Tsy fandatsana, sanatria, na fandatsahana amin’ny lalina sy ratsy kokoa amin’izay efa mahavoa fa mbola fampahatsiahivana sy fampitandremana ihany: fitiavana, fifampitsinjovana… Inona tokoa ny hitranga sy hiainana, raha mbola mihombo sy mitombo ihany, sanatria, izao fihanaky ny valanaretina izao? Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa… tsinjovina mialoha.
Soa ihany, be lavitra no ho ny marary mbola tsaboina ireo efa sitrana. Ny fanantenana no mamelona, ny finiavana no mampandroso. Mby aiza? Izay tsy miomana amin’ny fahombiazana, miomana amin’ny fahavoazana.